टिकटकबाट बसेको माया प्रेमले होटेलमा बोलायो त्यसपछि …. – Kavrepati
Home / रोचक / टिकटकबाट बसेको माया प्रेमले होटेलमा बोलायो त्यसपछि ….
admin October 27, 2021	रोचक Leaveacomment 121 Views
इटहरी । युवतीमाथि क रणी पछि लु ट पा ट ग रे को आ रो प मा सुनसरी प्रहरीले १ पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । भिडियो शेयरिङ सोसियल नेटवर्क टिकटकबाट चिनजान भएकी युवतीलाई होटलमा बोलाइ ।यस्तो कार्य गरेपछि प्रहरीले कास्कीका पुरुषलाई इटहरीमा पक्राउ गरेको हो ।
पीडित युवतीको उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा कास्कीको कास्कीकोट गाउँपालिका–४ का ३९ वर्षीय राजीव गुरुङ छन् । प्रहरीका अनुसार राजीवले टिकटकमार्फत चिनजान भएकी युवतीलाई भेट्न भनेर इटहरीस्थित होटलमा बोलाएका थिए । होटेलमा २ दिनसम्म युवतीमाथि क र णी ग रे र राजीव पी डि त यु व ती कै ग र गहना र पैसा लि एर फ रार भएका प्रहरीको भनाइ छ ।
कास्कीबाट गत माघ २५ गते इटहरी आएका गुरुङ इटहरी उपमहानगरपालिका– ९ स्थित आरआर होटलमा २ दिन बसेका थिए । होटलमा भेट्न बोलाएकी युवती बाथरुम गएको बेला गुरुङ माघ २७ गते सुनको झुम्का, ब्रास्लेट, सिक्री, नगद २७ हजार पाँचसय, सांग्रिला विकास बैंकको एटीएम र मोबाइल फोन लिएर भागेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा जा हे री परेको थियो ।
इटहरीकी युवतीमाथि यस्तो कार्य गरेर फरार भएका गुरुङलाई झापाकी महिला भेट्न जाँदै गर्दा इटहरीबाटै पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । इटहरीकी युवतीलाई ठ गी ग रेर गुरुङ सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै चिनजान भएकी झापाकी महिलालाई भेट्न आउँदै गर्दा इटहरीबाट पक्राउ परेका हुन् ।
Previous अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने!
Next सर्वहारा वर्गका छोराछोरी खाडीमा श्रम गर्दै, प्रचण्डका नातिनीहरू लण्डनमा मुस्कान छर्दै-